Please Respond – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွန်းပညာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး Ghost ဇာတ်ကားကို နမူနာထားလို့ ရေးထားတာ ရှိပါတယ်။ အမေရိကန် ရုပ်ရှင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းက ပို့ချချက်တစ်ခုကို ဘာသာပြန်ရင်း ဆွေးနွေးထားတာပါ။ လောလောဆယ် ဒေ၀ီဂျာနယ်မှာ အခန်းဆက် ဖော်ပြနေပါတယ်။ အဲဒါကို ကျွန်တော့်ဘလော့(ဂ်)မှာ တင်သင့် မတင်သင့် ပရိသတ်ရဲ့ သဘောထားကို တောင်းခံပါရစေ။ သည်မှာ တုံ့ပြန်လာတဲ့ ကွန်မန့်အရေအတွက်ပေါ် မူတည်ပြီး တင်မယ် မတင်ဘူးဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ဖို့ စိတ်ကူး ရမှာပါခင်ဗျား။
Author lettwebawPosted on6December 20106December 2010 Categories Survey
9 thoughts on “Please Respond”
Pls carry on sayar.
6 December 2010 at 2:04 pm
ကျွန်မတို့ လို အဝေးရောက်နေလို့ ပြည်တွင်းက မဂ်ဂဇင်းတွေ မဖတ်နိုင်တဲ့ သူတွေ အဖို့ ဆရာ တင်ပေးမယ်ဆိုရင် တော့ ၀မ်းသာစွာ ဖတ်ရတာပေါ့ဆရာ။
ဆရာ့စာတွေဖတ်ချင်လွန်းလို့ဘာများအသစ်တင်မလဲ ဆိုပြီး တစ်နေ့တစ်နေ့ဝင်ဝင်ကြည့်ရတဲ့ အကြိမ်ပေါင်း မနည်းပါဘူး ဆရာ။ ကျေးဇူးပြုပြီး အချိန်ရတဲ့အခါ မျှဝေစေချပါတယ်။
7 December 2010 at 5:12 am
wanna to read ,sir.
i want to read about script writing ,sayar ,whatsoever i think this post may be good for many indie myanmar filmmaker .thanks sayar
တင်ပေးပါ … ဆရာ။ ၀ါသနာရှင်တွေအတွက် လေ့လာလို့ရတာပေါ့။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
မေးစရာတောင် မလိုတာကြီးကို 🙂
Previous Previous post: စမလုံးချင်ဘု လုံးလုံးကြီး စိတ်နာ (၆)
Next Next post: စမလုံးချင်ဘု လုံးလုံးကြီး စိတ်နာ (၇)